Tsvaga magakanje mukati genshin impact ❤️ GOTAUKA.COM
Chishanu, september 24, 2021
Tsvaga makara mukati genshin impact
Last updated Jul 14, 2021 444 0
En genshin impact magakanje Icho chinhu chaunofanirwa kushandisa uye kubika zvakakosha kuchikafu ichi chine zvazvakanakira icho chinokupa iwe kuti udzore HP, zvakare kupora kubva zero zero kana kupa mamwe manhamba kana uchidya ichi chakanakisa chikafu.
Iwe unogona kuzvitsvaga uye uzviwane mumakungwa, mahombekombe, mahombekombe erwizi uye mabhanga. Musango rematombo reGuyun unofanirwa kutsvaga makungu ari pamahombekombe enzvimbo idzi.
Kunyangwe iwe uchigona kupunzika munzvimbo idzi nekuti dzimwe nguva dzinenge dzisina magakanje munzvimbo dzataurwa.
Kunyangwe paine nzvimbo chaipo kwaunogona kuenda kuti utarise kuoneka kwezvienzaniso zvekunze zviri makamba, inonzi Luhua Pool, Liyue imomo uchawana madziva akawandisa ane ruvara rwebhuruu rwakajeka uripedyo negungwa.
Ini ndinokurudzira kuti kana iwe uri mukutsvaga kweaya makara uye iwe ukawana zvimwe zvinhu kana zvakasiyana zvinhu, zviunganidze, zvinokushandira gare gare uye iwe ungazviponesa kubva mukuzvitsvaga paunenge uchizvida.
Tsvaga cecilia mu genshin impact
Nyama muto genshin impact